စီပီယူ | | OS ကို-STORE ဘလော့ခ်
ဆာဗာများအတွက် Intel က Server ကို Processor များ-Intel® Atom ™ပရို
အောက်တိုဘာလ 10, 2015 မောင်းသူ 0
Product Name Status Launch Date # of Cores TDP Intel® Atom™ Processor C2750 (4M ကကက်ရှ်, 2.40 GHz အမြန်နှုန်း) Launched Q3’13 8 20 W Intel® Atom™ Processor C2730 (4M ကကက်ရှ်, 1.70 GHz အမြန်နှုန်း) Launched Q3’13 8 12... ဆက်ဖတ်ရန် | ယခု Share!
Intel က Server ကို Processor များ-Intel®Itanium®ပရို
Product Name Status Launch Date # of Cores Recommended Customer Price Processor Graphics ‡ Intel® Itanium® Processor 9560 (32M ကကက်ရှ်, 2.53 GHz အမြန်နှုန်း) Launched Q4’12 8 TRAY: $4650.00 Intel® Itanium®... ဆက်ဖတ်ရန် | ယခု Share!
Intel က Server ကို Processor များ-အမွေအနှစ်Intel®Xeon®ပရို
Product Name Status Launch Date # of Cores Recommended Customer Price 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz အမြန်နှုန်း, 1M ကကက်ရှ်, 667 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.50... ဆက်ဖတ်ရန် | ယခု Share!
Intel က Server ကို Processor များ-Intel® Xeon ဖိ™ Coprocessors
Product Name Status Launch Date # of Cores Recommended Customer Price Intel® Xeon Phi™ Coprocessor 3120A (6GB အထိ, 1.100 GHz အမြန်နှုန်း, 57 အဓိက) Launched Q2’13 57 $1695.00 – $1960.00 Intel® Xeon Phi™... ဆက်ဖတ်ရန် | ယခု Share!
Intel က Server ကို Processor များ-Intel®Xeon®ပရို 3000 အစဉ်အတိုင်းလိုက်ခြင်း
စက်တင်ဘာလ 30, 2015 မောင်းသူ 0
Product Name Status Launch Date # of Cores TDP Processor Graphics ‡ Intel® Xeon® Processor W3690 (12M ကကက်ရှ်, 3.46 GHz အမြန်နှုန်း, 6.40 GT/s Intel® QPI) End of Life Q1’116130 W Intel® Xeon® Processor... ဆက်ဖတ်ရန် | ယခု Share!
Intel က Server ကို Processor များ-Intel®Xeon®ပရို 5000 အစဉ်အတိုင်းလိုက်ခြင်း
စက်တင်ဘာလ 28, 2015 မောင်းသူ 0
Product Name Status Launch Date # of Cores TDP Processor Graphics ‡ Intel® Xeon® Processor X5690 (12M ကကက်ရှ်, 3.46 GHz အမြန်နှုန်း, 6.40 GT/s Intel® QPI) End of Life Q1’116130 W Intel® Xeon® Processor... ဆက်ဖတ်ရန် | ယခု Share!
Intel က Server ကို Processor များ-Intel®Xeon®ပရို 6000 အစဉ်အတိုင်းလိုက်ခြင်း
စက်တင်ဘာလ 23, 2015 မောင်းသူ 0
Product Name Status Launch Date # of Cores TDP Processor Graphics ‡ Intel® Xeon® Processor X6550 (18M ကကက်ရှ်, 2.00 GHz အမြန်နှုန်း, 6.40 GT/s Intel® QPI) End of Life Q1’10 8 130 W Intel® Xeon® Processor... ဆက်ဖတ်ရန် | ယခု Share!
ဆောင်းပါး Category: Select လုပ်ပါမောင်းသူ(195) 3က G / 4, G စက်ပစ္စည်း(40) လြှောကျလှာ(5) တီဗီ Card ကို(17) ဗီဒီယိုကဒ်(20) ကြိုးမဲ့စက်(113)OS ကို-STORE(232) အသက်(92) သတင်း(33) အခြား(44) ပရိုမိုးရှင်း(33) နည်းပညာ(58) အသုံးပြုသူကို manual(6)OSGEAR ပံ့ပိုးမှု(15) networks(5) သိုလှောင်ခြင်း(10)ထုတ်ကုန်များ(589) 3က G & ကြိုးမဲ့ကဒ်ကို(16) Apple က iPhone ကိုအိုင်ပက်, iPod(18) ကင်မရာ & အစိတ်အပိုင်းများ(10) ကွန်ပျူတာ(115) CPU ကိုပရို(157) အီလက်ထရောနစ်(13) IC Chipset(2) မိုဘိုင်းဖုန်း(248) လုံခြုံရေးထုတ်ကုန်များ(12) တက်ဘလက်ပီစီကွန်ပျူတာ(40)
HTC က 64-နည်းနည်းက Windows ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု နည်းပညာ Software များ Intel က OS ကို-STORE ပရိုဆက်ဆာ စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ Technology_Internet ဥပဒေရေးရာအနက် processor ​​ကို စီပီယူ Samsung က စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု device ကိုမော်ဒယ် ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် Nokia က မိုဘိုင်းဖုန်း HD Graphics
မူပိုင်ခွင့် © 2019 | မူရင်းရင်းမြစ်နည်းပညာ Co. ,, Ltd မှ